चीन कालो र हरियो पासा सेट तीतो कुनामा उत्पादन र कारखाना संग सेट टियानकी
हाम्रो दैनिक बोर्ड खेलहरूमा पासा बच्चा हाम्रो लागि अपरिहार्य उपकरण भएको छ। जब पासा हातमा समात्छ वा खेल तालिकामा घुमाइन्छ, प्रत्येक बच्चाले चम्किलो रंगीन प्रकाश निकाल्छ, जुन धेरै आँखा चिम्लिने छ। तिनीहरू हाम्रो हातमा जादू हतियार हुन्। बाहिर फालिदा, हामीले निर्धारित गरेका छौं कि तपाईं अन्तिम विजेता हुनुहुन्छ।
यो पासा राल सामग्री बाट बनेको छ, र धार एक धारदार-पोइन्ट प्रकार हो। यो तपाइँको हातमा समात्दा लाठी जस्तो लाग्नेछ। यो एउटा तीखो कोणको पासाको विशेषता हो।
पासाले डिजाइन पोइन्टको रूपमा सागरको रंग उधारो दिन्छ। यदि तपाईं पासाको छेउमा हेर्नुभयो भने, तपाईं गाढा र गहिरो समुद्री किनार र त्यसमाथि गहनाहरूसँग सफा पानी देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं पासालाई माथि देखि तल सम्म हेर्नुभयो भने, तपाईं एक रहस्यमय सागर विश्व देख्नुहुनेछ। पारदर्शी प्लास्टिक बक्सले सुसज्जित, यसले यसको उच्च-अन्त शैली हाइलाइट गर्दछ र हाम्रो अधिकारको लागि योग्य छ।
यदि तपाईंलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, र तपाईंलाई सहि उद्धृत गर्नको लागि, कृपया हामीलाई एक अनुमान दिनुहोस्, हामीलाई अनुमानित भेक्टर जान्नु आवश्यक छ, किनकि त्यहाँ sets० सेट र २००० सेट बीच ठूलो भिन्नता छ।
यदि तपाईं हाम्रो उत्पादनहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि समयमा अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, र हामी तपाईंलाई समयमा छोड्ने जानकारीलाई जवाफ दिनेछौं।
उत्पादको विशिष्टताहरू D4, D6, D8, D10, D10%, D12, D20 हुन्, जस मध्ये धेरै जसो बोर्ड गेम डन्जियन्स र ड्र्यागनमा प्रयोग हुन्छन्। उत्पादन प्रक्रिया निम्नानुसार छ: पहिलो मोल्ड, त्यसपछि र mod्ग मोडुलन, त्यसपछि पोलिश र पोलिश, र त्यसपछि बाँकी सतहमा नक्काशी, र अन्तमा रंग र हावा सुकाउने, यो सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया हो।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक ग्राहक, क्याथरिन टास्चर यस पासा धेरै मन पर्छ। १ 130० भन्दा बढी सेट पहिलो पटक अर्डर गरिएको छ। सामानहरू प्राप्त गरेपछि उनीहरूले 5-स्टार रेटिंग पनि छोडे। पासाको गुणस्तर धेरै राम्रो छ, आदि। यसले ग्राहकहरू हामीमा धेरै चासो राख्दछ भनेर देखाउँदछ। यस कालो र हरियो पोइन्ट पासाको मनपर्ने। र अष्ट्रेलियाई ग्राहक विल स्पूनर-एडी हाम्रो नयाँ कालो र हरियो पोइन्ट पासामा धेरै चासो राख्दछन्।
छोटो छानबिन पछि, हामीले तुरून्त पासाको १०० सेटको लागि अर्डर राख्यौं, र त्यसपछि तिनीहरूलाई अनुकूलित-मुद्रित पारदर्शी बक्समा प्याक गर्‍यौं। पासा गुण प्रतिबिम्बित र सेवा धेरै राम्रो छ।
(१): तपाईंको पासा हस्तनिर्मित छ?
(२): तपाईं पासा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ?
उत्तर: पक्कै पनि, हामी पासालाई अनुकूलित गर्न सक्छौं, र हामी पासामा कुर्सी लोगो छाप्न वा प्रिन्ट गर्न सक्दछौं। थप रूपमा, हामी प्रिन्टिंग बक्सलाई अनुकूलित गर्न सक्छौं, र पाहुनाहरूद्वारा प्रदान गरिएको धेरै जसो लोगोहरू प्रिन्ट गर्न सकिन्छ।
()): यातायातको बखत तपाइँ कसरी क्षतिबाट बच्न सक्नुहुन्छ, र यदि क्षतिको समस्या छ भने तपाईंले के गर्नुपर्छ?
उत्तर: यस प्रश्नको बारेमा, कृपया निश्चित हुनुहोस् जब हामी पासा प्याक गर्दछौं, हामी स्पञ्ज पक्षहरू भर्न र कुनामा संरक्षण गर्न पासालाई नोक्सानबाट बचाउँनेछौं। क्षति को समस्या को रूप मा, हामी बिक्री पछि replenishment पूरा, कुराकानी र यसलाई पुनःपूर्ति, र ग्राहक संग एक सहज लेनदेन पुग्नेछौं।
भनाइ भइरहन्छ: यदि तपाईं राम्रो जीवन बिताउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंको हातमा केही हरियो हुनुपर्दछ।
अघिल्लो: गुलाबी र निलो पोइन्ट पासा सेट
अर्को: गुलाब डाईन्ड सेट
गुलाब डाईन्ड सेट